Portable Magnetic Wireless 15W 10000mAh Mini Powerbank | ဝယ်ပါ။ WoopShop®
အိတ်ဆောင်သံလိုက်ကြိုးမဲ့ 15W 10000mAh Mini Powerbank
$44.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $66.99
တရုတ် / 5000mAh / အပြာရောင်တရုတ် / 5000mAh / ခရမ်းရောင်တရုတ် / 5000mAh / လိမ္မော်ရောင်တရုတ် / 5000mAh / အစိမ်းရောင်တရုတ် / 5000mAh / အနက်ရောင်တရုတ် / 10000mAh / ခရမ်းရောင်တရုတ် / 10000mAh / အပြာရောင်တရုတ် / 10000mAh / အနက်ရောင်တရုတ် / 10000mAh / အစိမ်းရောင်တရုတ် / 10000mAh / လိမ္မော်ရောင်တရုတ် / 10000mAh / အပြာနုရောင်တရုတ် / 5000mAh / အပြာနုရောင်
အိတ်ဆောင်သံလိုက်ကြိုးမဲ့ 15W 10000mAh Mini Powerbank - China / 5000mAh / အပြာရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CCC၊ CE၊ ROHS၊ FCC
အသုံးချမြန်သောအားသွင်းချက်ပရိုတိုကောများ - USB PD
Output Interface- Lightning၊ Type C
ပါဝါအရင်းအမြစ်- AC အရင်းအမြစ်
မော်ဒယ်နံပါတ်- 56341 အတွက်
Intelligent Charge- မရှိပါ။
တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော iPhone Model1- iPhone13/13Pro/13ProMax/mini အတွက်၊ iPhone12/12Pro/12ProMax/mini အတွက်
တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်- ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းများ
5000mAh- Lightning + type-c မျက်နှာပြင်
10000mAh- USB-C + type-c မျက်နှာပြင်
ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်- PD20w သံလိုက်အားသွင်းမှု
Huawei Xiaomi PD22.5W စူပါအမြန်အားသွင်းစနစ်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်ကန့်သတ်ချက်များ- PD20w ပါဝါဘဏ် + 15W ကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာ
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား- 5000mAh: 110*65*10mm 120g/10000mAh 110*68*17 mm 185g
ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းပုံ- အထုပ် + စက် + ဒေတာလိုင်း + ညွှန်ကြားချက်
Pd20w သံလိုက်စုပ်ယူမှုပါဝါဘဏ် + 15W ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း။
အားသွင်းပရိုတိုကောသည် တည်ငြိမ်ပြီး မီးမလောင်ပါ။
မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် Bluetooth နားကြပ်များအတွက် ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း။
ထိပ်တန်းထုတ်ကုန်၊ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီရောက်ရှိခဲ့သည်။ အထူးအကြံပြုထားသည်။
အားလုံးအဆင်ပြေတယ်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! လေးစားပါတယ်! အားလုံးအဆင်ပြေတယ်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ပစ္စည်းကောင်းပေမယ့် ပါဆယ်က ၂လလောက်ကြာသွားတယ်။
မော်စကိုသို့ ရက် ၄၀ ကြာသည်။
ပုံတွေမှာကြည့်သလိုပဲ ထို့အပြင် ရောင်းသူသည် ကျွန်ုပ်အား မိုဘိုင်းလ်များတွင် ကပ်ထားနိုင်စေရန် ကြိုးများပေးပါသည်။